မော်တော်ကားဖြင့် ခရီးသွားနည်း | ခရီးသွားသတင်း
မော်တော်ကားနဲ့ ခရီးသွားရတာ ကြုံဖူးလား။ ခရီးကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျော်ပျော်ပါးပါး ပျော်ပျော်ပါးပါး အပန်းဖြေခရီးမှာ လိပ် ဒါမှမဟုတ် ခရုတစ်မျိုးမျိုး တွဲလောင်းအိမ်နဲ့ လိုက်သွားမလား။ လူတော်တော်များများက ဒီအိပ်မက်ကို မက်ဖူးကြတယ်၊ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ ကျွန်တော် ပြောပြချင်ပါတယ်။ မော်တော်ကားနဲ့ ဘယ်လိုသွားမလဲ။
ဤကဲ့သို့သော ပထမဆုံးခရီးစဉ်သည် လူမသိသူမသိသို့ ခရီးတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် ဤအံ့ဖွယ်စွန့်စားခန်းကို မစတင်မီ သိထားရမည့်အချက်အချို့ရှိပါသည်။
1 မော်တော်ဆိုင်ကယ်များနှင့် ကားတန်းများ
2 မော်တော်ကားနဲ့ ဘယ်လိုသွားမလဲ။
3 မော်တော်ကားဖြင့် ခရီးသွားခြင်းအတွက် အကြံပြုချက်များ
မူလမော်တော်အိမ်သည် ၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းမှ စတင်ခဲ့ပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် မြင်းစီးနေဆဲဖြစ်သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင်၊ နောက်ရာစုနှစ်များရဲ့ 20 ခုနှစ်များဆီသို့၊ မော်တာပါသော မော်တော်အိမ်များ စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည်။. အော်ဒါမှာထားရတဲ့အတွက် ဒီကားတွေကို တတ်နိုင်သူတွေက ချမ်းသာတဲ့သူတွေပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Ford ကားကို အခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်အသုံးပြုကာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအသုံးပြုရန်အတွက် ပထမဆုံးသော မော်တော်အိမ်တစ်လုံးကို အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ Campingcar က တွေးဆခဲ့သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်း တိုးတက်မှုနှင့်အတူ လက်တွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ခေတ်မီမော်တော်အိမ်များ သူတို့သည် လောကလမ်းများပေါ်တွင် ပေါ်လာကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွင် Volkswagen Kombi ကို စိတ်ထဲတွင်သေချာပေါက်ရှိပါသည်၊ သို့သော်အမှန်တရားမှာ အခြားအမှတ်တံဆိပ်များသည် ကားနှင့်အိမ်တို့ကို တူညီသောယာဉ်ဖြင့်ပေါင်းစပ်ခြင်း၏ဤစွန့်စားခန်းတွင်သူတို့ကိုယ်သူတို့စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ ဆက်လက်ခံစားနေရပါသည်။ Covidien-19 မော်တော်ကားဖြင့် ခရီးသွားခြင်းတွင် အောက်ပါတို့ ရရှိခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့? ကောင်းလိုက်တာ၊ အဲဒါက အကောင်းဆုံးပဲ။ လူမှုရေးအကွာအဝေးကိုထိန်းသိမ်းပါ။ ဘာမှမမျှဝေဘဲနဲ့ ငါတို့ကိုယ်ပိုင်အရာတွေကို ကိုင်တွယ်ပါ။
မော်တော်အိမ်ဖြင့် ခရီးသွားခြင်းသည် စစ်မှန်သော စွန့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံ သို့မဟုတ် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကို သိရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သဘာဝတရားနှင့် ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ကာ၊ အခြားမသိနိုင်သော လှပသော သို့မဟုတ် ထူးဆန်းသောနေရာများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိကာ၊ ခရီးသွားများသောလမ်းကြောင်းများမှ ဝေးကွာသွားကာ ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိရာကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်ကြသည်။ ကလေးတွေ ဒါမှမဟုတ် တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ခရီးသွားရင် ဟိုတယ် ဒါမှမဟုတ် တည်းခိုခန်းတွေနဲ့ ငြင်းခုံတာထက် ပိုကောင်းပါတယ်။
အတော်များများရှိပါတယ် ခရီးမသွားခင်မှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မေးရမယ့် မေးခွန်းလေးတွေပါ။ ဒါကြောင့်။ ပထမ၊ ဘယ်ကားအမျိုးအစားကို ငှားရမလဲ၊ ဝယ်သင့်တယ်။ သင့်တွင်ရှိသော ဘတ်ဂျက်နှင့် ပမာဏပေါ်တွင် များစွာမူတည်ပါသည်။ caravan အရွယ်အစား မင်းဘာတွေတွေးနေတာလဲ။ ကီလို 750 ထက်မပိုသော အလေးချိန်ရှိသော ယာဉ်ငယ်များရှိပြီး ကား သို့မဟုတ် ထရပ်ကားပါ ကီလို 3.500 အထိ ရှိသည်။ အလေးချိန်ပိုကြီးတဲ့ ကာဗာတွေလည်း ရှိတယ်။ သင့်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် သို့မဟုတ် မှတ်တမ်းပေါ်တွင်မူတည်သောကြောင့် အလေးချိန်သည် သတိထားရမည့်အရာဖြစ်သည်။ဒါကို ဘာက လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိလဲ။
ကားတန်းစီးဖို့ စိတ်ကူးထားရင် သင့်ကားနဲ့ ချိတ်ပြီး သင်လိုချင်တဲ့နေရာနဲ့ အပြင်ထွက်ပါ။ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာ ခရီးသွားကားတန်းဖြစ်သည်။ အငြိမ်မနေပါ။ သင့်ကားနဲ့မသယ်နိုင်တဲ့အတွက် တစ်နေရာတည်းကို နှစ်စဉ်သွားမယ်ဆိုရင် Static က အဆင်ပြေပါတယ်။ ဝယ်တဲ့အချိန်မှာ၊ အသုံးပြုပြီးသား သို့မဟုတ် အသစ်တစ်ခု သင့်လျော်ပါသလား။ ခက်တဲ့မေးခွန်း…
ယေဘူယျအားဖြင့် မော်တော်အိမ်သို့ ခရီးသွားလာသူအသစ်များသည် ရွေးချယ်လေ့ရှိသည်။ ပထမဝယ်ယူမှုအဖြစ် အသုံးပြုသည်။။ သား စျေးသက်သာသည် ပိုက်ဆံအများကြီးမကုန်ဘဲ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ သင်ပေးတယ်။ ထို့အပြင်၊ ကလေးငယ်များ သို့မဟုတ် တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူ ကာရာဗန်ကိုအသုံးပြုပါက သင်သည် အလွန်အသစ်သောအရာကို ချိုးဖျက်ရန် သို့မဟုတ် ပျက်စီးရန် ဖိအားများစွာရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အချို့သောမေးခွန်းများကိုစစ်ဆေးရန်အဆင်ပြေသည်- စိုထိုင်းဆကို သတိထားပါ။ကာဗာများကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး အသုံးမပြုသောကြောင့် စိုထိုင်းဆများ စုပုံလာနိုင်သောကြောင့် တံခါးများ၊ ပြတင်းပေါက်များနှင့် အမိုးများ၏ အစွန်းများကို ဂရုပြုပါ။
ကျိုးနေသောသော့ခလောက်များနှင့် စစ်ဆေးခြင်းသည်လည်း မဆိုးပါ။ ခိုးယူခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း စစ်ဆေးပါ။ အထူးသဖြင့် ပုဂ္ဂလိကရောင်းသူထံမှ တပတ်ရစ်ဝယ်လျှင် သင်မသိနိုင်ပါ။ နောက်တစ်ခု သတိထားရမှာက သမိုင်းကြောင်းကို ဖြစ်နိုင်ရင် ရအောင်လုပ်ပါ။ နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ ယာဉ်- ဘရိတ်၊ မော်တာ၊ လျှပ်စစ်ပြဿနာများနှင့် အခြားအရာများ။
နောက်ဆုံး၊ဘယ်အရာတွေက အခြေခံရှိရမယ်။ ငါ့ရဲ့ ပထမဆုံး မော်တော်အိမ် ရေချိုးခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊ မီးဖို၊ မီးဖိုချောင်သုံး ရေကန်၊ ချက်ပြုတ်မျက်နှာပြင်များ၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ မိုက်ခရိုဝေ့မီးဖို၊ သိုလှောင်ရာနေရာများနှင့် နှစ်ထပ်ကုတင် ခြောက်ခုကြား။ ဤအချက်အလက်သည် ကားနှင့် မော်တော်အိမ်နှင့် ချိတ်ထားသော ကားနှစ်စီးစလုံးအတွက် အကျုံးဝင်ပါသည်။
မော်တော်ကားဖြင့် ခရီးသွားခြင်းအတွက် အကြံပြုချက်များ
ပထမဆုံးစဉ်းစားရမယ့်အချက်က အဲဒါပါပဲ။ ကားကို မောင်းနှင်ခြင်းသည် ကားကိုဆွဲယူသော ကားကို မောင်းနှင်ခြင်း သို့မဟုတ် ကားအိမ်သို့ မောင်းနှင်ခြင်းကဲ့သို့ မဟုတ်ပါ။ အခြားတည်ငြိမ်မှု၊ အခြားရပ်တန့်သည့်အကွာအဝေး၊ ယာဉ်သည် ပိုရှည်သည်၊ ပိုမြင့်ပြီး ပိုလေးသည်။ ၎င်းသည် ဖြတ်ကျော်မှုများကြောင့်လည်း ပိုမိုသက်ရောက်မှုရှိပြီး မညီညာသော မျက်နှာပြင်များတွင် ပိုမိုမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေသည်။ လောင်စာဆီလည်း ပိုကုန်တာမို့ အရှိန်ထိန်းသင့်ပါတယ်။ အချက်အလက်အသစ်တွေ အများကြီးရှိလား။ ထို့နောက်သင်အမြဲသင်တန်းတက်နိုင်သည်။
တော်တော်များများ ပေးတဲ့ အကြံဉာဏ်တစ်ခုကတော့ အီးပထမဆုံး ခရီးက ငှားထားတဲ့ မော်တော်အိမ်/ကားတန်းနဲ့ပါ။ ပြီးတော့ ဟုတ်ပါတယ်၊ အတွေ့အကြုံက အရမ်းကောင်းပြီး အဲဒါကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သိရင် အပြင်ထွက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ဝယ်ပါ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် ယာဉ်ကိုယ်တိုင်သာမက ၎င်း၏စက်ပစ္စည်းများတွင်ပါ အရေးကြီးသည်- စခန်းချထိုင်ခုံများ၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ၊ ဘက်ထရီများ၊ ဓာတ်မီးများ၊ ကုတင်များနှင့် အခွန်များပင်။
အသုံးအနှုန်းများဖြင့် ရှုပ်နေသည်။ မော်တော်အိမ်နှင့် ကားတန်း? သူတို့က မတူဘူး။ ကာရာဗန်သည် ယေဘူယျအားဖြင့် ကားနှင့်တွဲဆက်ထားသည့် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တွန်းကန်အားမရှိသောယာဉ်ဖြစ်ပြီး မော်တော်အိမ်သည် ထရပ်ကားကို မော်တာအိမ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ ဤကဲ့သို့သော ပထမဆုံးခရီးစဉ်အတွက် လူတိုင်းက ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုကို အကြံပြုသည်- လမ်း၏ခရုဖြစ်လာရန်။
မော်တော်အိမ်/ကားတန်း၏ အရွယ်အစားသည် ခရီးသွားမိသားစု၏ အရွယ်အစားပေါ်တွင် မူတည်သည်။. မိသားစုနဲ့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေ တွဲလောင်းနဲ့ ခရီးသွားရင် တစ်ကိုယ်တည်း ဒါမှမဟုတ် အဖော်နဲ့ အတူတူဘဲ။ အလွန်အမိုက်စား ကာရာဗန်များ နှင့် အခြားသော အလွန်ရိုးရှင်းသော ကားများ ရှိပါသည်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးပူးပေါင်းရန် စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ motorhome club နှင့် အကြံဥာဏ်များ ရယူပါ။ လမ်းပြ ဒီကမ္ဘာကြီးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အရာတိုင်းကို ပြီးတော့ ဒီအချက်အလက်ဟာ အစားအသောက်ကို သိုလှောင်ရုံသာမက တခြားဘာကိုမှ လောင်စာထည့်ဖို့ သက်သက်မဟုတ်တဲ့အတွက် အလွန်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။
မော်တော်ကားနဲ့ ခရီးသွားတဲ့အခါတွေလည်းရှိတယ်။ စဉ်းစားရမည့်ကိစ္စများ ဘယ်မှာ သိမ်းထားရလဲ ကြိုက်တယ်။ သောက်သုံးရေအသုံးပြုသောရေကို မည်သည့်နေရာတွင် စွန့်ပစ်ရမည်၊ ဓာတ်ငွေ့ကို သယ်ယူပုံ၊ ရှေးဦးသူနာပြုသေတ္တာ၊ ရေချိုးခန်းသုံးဓာတုပစ္စည်းများပလပ်ထိုး အဒက်တာများ၊ ဘီးလပ်များ၊ စားပွဲကုလားထိုင်များ၊ အိမ်နှင့်ကားအတွက် ကိရိယာများ၊ လျှပ်စစ်အပူပေးစက်၊ တီဗီ၊ မီးဖိုချောင်သုံး ပန်းကန်များ၊ အကင်အတွက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ကားတန်းအတွင်း လမ်းလျှောက်ရန် ဖိနပ်များ၊ ညစ်ပတ်မှုမဖြစ်စေရန် လက်အိတ်များနှင့် များစွာသော၊ အများကြီးပို...
အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊ သူသည် စွန့်စားခန်းတစ်ခုသို့ သွားနေသည်။ ဟိုရောက်တာနဲ့ ဘယ်မှာမှ မရပ်နိုင်ဘူး ဆိုတာ သိထားရမယ်။ ကာရန်းများအတွက် စခန်းချသည့်နေရာများရှိသည်။ အလွန်လက်တွေ့ကျမည့် အထောက်အကူပစ္စည်းများဖြင့်။ ဒါမှ အစစအရာရာ စီစဥ်ထားဖို့ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သုတေသနအနည်းငယ်လုပ်ရတာ အဆင်ပြေတယ်။ အိပ်မက်၊ အစီအစဉ်ဆွဲပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါး၊ ဒါပဲလုပ်ပါ။ ကံကောင်းပါစေ!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » မော်တော်ကားနဲ့ ဘယ်လိုသွားမလဲ။
Cuenca ရဲ့မြို့ဟောင်းမှာ ဘာလုပ်ရမလဲ
Isla de Lobos တွင်ပြုလုပ်ရမည့်အရာများ